Andriamanitra ao anaty boaty - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > by Tammy Tkach > Andriamanitra ao anaty boaty
Ny mpanoratra Elyse Fitzpatrick dia manoratra ao amin'ny bokiny hoe God of the Heart: ny tsy fahalalana ny sitrapo sy ny fahadisoana momba ny toetran'Andriamanitra dia antony roa lehibe lehibe manompo sampy. Ary manampy koa aho: Ireo no antony mahatonga ny olana maro be ataon'ny olona momba ny fivavahana sy ny fiainana. Ny tsy fahafantarana sy hadisoana dia mitarika antsika hametraka an-tsika an'Andriamanitra ao anaty boaty.
Tsy te hanome ohatra aho satria fantatro sy Andriamanitra fa izaho sy ny fiangonako dia teo ary nanao izany. Ary azoko antoka fa mandra-pahitantsika mifanatrika mivantana amin'Andriamanitra dia tsy ho afaka hampihetsika ny tsy fahalalana sy ny fahadisoana toa fihevitry ny toetran'ny olombelona isika.
Aleoko mifantoka amin'ny fomba famahana ny tsipìka, esory ny kasety, esory ny fonosana ary sokafy ilay boaty. Esory ny tsipìka - mianara momba ny toetran'Andriamanitra. Iza izy Inona avy ny toetrany sy ny toetrany? Avelao izy hampahafantatra ny tenany amin'ny alàlan'ny Soratra Masina. Esory ny kasety - mandalina momba ny lahy sy ny vavy ao amin'ny Baiboly. Inona no vavaka novaliany ho azy ireo ary amin'ny fomba ahoana? Soharo ny famafa ravina - jereo ny fiainanao hahitana hoe manao ny sitrapony sy ny fomba namolavola ny fiainanao ianao. Tsy isalasalana fa hafa ny drafitra nomeny.
Sokafy ny boaty - fantaro ary ekena ampahibemaso fa tsy hainao ny zava-drehetra ary tsy fantatry ny fiangonanao ny zavatra rehetra. Avereno amiko: Andriamanitra dia Andriamanitra fa tsy misy aho. Noho ny filantsika, ny faniriana ary ny toetrantsika latsaka, isika olombelona dia manana fironana hamorona an’Andriamanitra tahaka ny endritsika. Amin'ny alàlan'ny eritreritsika sy ny hevitrao dia manangana azy io isika araka ny faniriantsika na ny filàntsika ka mifanaraka amin'ny toe-javatra manokana iainantsika.
Fa aoka isika hisokatra amin'ny fitarihana sy ny fampianarana ny Fanahy Masina. Amin'ny fanampiany dia afaka manokatra ny boaty isika ary avelao ho Andriamanitra.